Umthandazo woMgwebi olilungisa. ? AmaKatolika okuqala kunye noMntu
Umthandazo kuMgwebi Olungileyo Yeyona ibhekiswa kwiNkosi uYesu Krestu kuphela ongumgwebi wethu phambi koThixo uYise.
Kubalulekile ukwazi ukuba imithandazo kufuneka yenziwe ngokukholwa.
Ilizwi leNkosi lisifundisa ukuba ukuba siyamfuna kufuneka sikholelwe ukuba uzosimamela ukusimamela kwaye le yimfihlo yako konke oku, ukuba sikholwe.
Ngaphandle kokholo imithandazo ngamagama angenanto kuphela angafikeleli nakuphi na ubugcisa kwaye angazalisekisi iinjongo ezazenzelwe zona.
Kuko konke oku kufuneka sazi ukuba zeziphi ezona zizathu zisenza ukuba sithandaze, abantu abaninzi babuza umgwebi olungileyo kuphela kodwa hayi ngokusuka entliziyweni kwaye ke umthandazo uphulukana nokusebenza.
1 Nguwuphi uMthandazo weJaji eyiLungisa?
1.1 Umthandazo wejaji yasekuqaleni yamaKatolika
1.2 Umthandazo kwijaji elungileyo yamadoda
1.3 Thandaza nje ukugweba ukukhulula ibanjwa
1.4 Umthandazo wejaji eligwebayo ngamatyala anzima
2 Ndingayifumana nini imithandazo?
Nguwuphi uMthandazo weJaji eyiLungisa?
UMnu Jesucristo Ungumhlobo wethu, umntakwethu kunye noMgwebi wethu Olungileyo.
Ubuzwa izinto ezininzi kwaye esinye sezona zicelo ziqhelekileyo kukukhusela thina kunye neentsapho zethu.
Uninzi lwamaKhristu luwenza lo mthandazo mihla le kwaye oku kufuneka kube njalo kuba yonke imihla ububi buhamba kwaye kuhlala kulungile ukushiya ikhaya ngokukhuselwa koMgwebi Olungileyo malunga ngamnye wethu.
Lo ngumthandazo owenziwa ngokusuka entliziyweni kuba sibeka ezandleni zethu eyona nto isondeleyo esinayo abasoloko bengabantwana bethu kunye nosapho ngokubanzi.
Yenza lo mthandazo ngaphambi kokuqala uhambo lwemihla ngemihla, nosapho lonke kwisidlo sakusasa Ngumbono olunge kakhulu kuba sikwakhuthaza ukwenziwa kobumbano kusapho kwaye sizalisekise oko kutshiwo lilizwi lika-Die soque ukuba ababini okanye abathathu bayavuma kwaye bacele kuBawo egameni likaYesu ukuba azonika izicelo ezivela ezulwini.
Umthandazo wejaji yasekuqaleni yamaKatolika
OwaThixo kwaye wagweba ngokufanelekileyo ukuba usolulela isandla sakho kumahlwempu nakwizityebi!
Ukuthanda okungapheliyo ukuxolelwa kunye nothando, ukukhanya kokomoya okukhanyisela iindlela zobumnyama, iZwi lobomi kunye nothando olunzulu, Ukufundisa kunye nobungqina obusondla ngomthandazo.
Wena mntu uphethwe kabuhlungu kwaye uhlazeka kakhulu, ukuba ngcwele kwaye unyulu yamkelwe ngokuthobeka ezesohlwayo ezibi kakhulu, Wena ungukumkani weenkosi, ohleli kwaye elawula bonke ububi kunye noluntu lonke, wamkelekile ngaphandle kokumbombozela okanye ukungcikiva Ukubetha kabuhlungu, Kwaye unike yonke into ngosindiso lwethu, Ngamana umthandazo wethu kunye nesicelo sethu size kuwe.
Iidemon nababenawe babaleka ngamandla omthandazo wakho, Wavusa abagulayo ezikhukweni zabo, Waphilisa iimfama ezikhukweni zabo. ubumfamaWabaphilisa abaneqhenqa, Ubanike ubomi nesonka abo bakulandelayo.
Uyandisile intlanzi kunye nezonka ukuze ubanike abantu, Uwavulela amanzi, wahamba phakathi kwabo, wanika imini nobusuku, Uxolo nemvisiswano, wena uMgwebi wethu olungileyo ngaphandle kokuthandabuza uhamba nabantu bakho, Ngaphandle kwemida unika yonke into, Kwaye usifezekisa isithembiso sakho, Xa umntu oza kuzinikela eze kuwe, Ungamhlazi okanye ungcatshe, Ungakhubekisi okanye usonzakalise, Usifundisa ngemifanekiso, Ushiya nelifa elingapheliyo kwiZibhalo Ezingcwele, Uyamamela umthandazo wethu kwaye uza kuthi.
Umthandazo usoloko uyindlela yokuphakamisa, ukongeza kwizicelo zethu, imibulelo yethu kunye nombulelo kuThixo osinika kunye namalungu osapho lwethu ukukhusela yonke imihla yehlabathi.
Ngokwenza lo mthandazo siyazi kwaye siyakholelwa ukuba ukhuseleko lobuThixo luhamba phambi kwethu kuyo yonke into esiyenzayo ngala mhla.
Icawe yama Katolika inomfuziselo womthandazo kwiJaji eyiJaji yasekuqaleni, kulo mzekelo womthandazo sibona ukuba siqala ngokuqonda zonke iimpawu zikaYesu Krestu kwaye emva koko senze isicelo kunye nokuphela kokubulela ukuvuma okuvunyelweyo, owokugqibela njengesenzo sokukholelwa ukuba Ummangaliso sele wenziwe.
Umthandazo kwijaji elungileyo yamadoda
Izilo ezindihlaselayo, Iingonyama ezindigqumayo, Ububi bulawula ecaleni kwam, Ndiziva ndisoyika kwaye Yintlungu. Andisakwazi ukuhamba, ndiyayoyika intswela-bulungisa;
Abandichasayo bayandihleka, Bayakholelwa ukuba banamandla, Kwaye nangona ubugwala bam bubonakala, Kukho uMntu oPhakamileyo, Oza kundinceda.
Yiza nje ukuba uMgwebi afike kum ngokukhawuleza, alahle ububi bonke, Amanye amadoda andihlasele kwaye endithuthumbisa, Gweba nje, yiza kum.
Ndiyakhwaza kwaye ndikhangela ubukho bakho ebomini bam, ndiyindoda etyhafileyo, ndikhangela kuwe kwaye andikufumani, Yiza uyeza uMgwebi wam endimthandayo.
Ukuba ubugqwirha nobubi, ukuba i ukusebenzelana nemimoya kunye nesanteria, Ngamana umtyholi nomoni, Bathobe iintloko zabo, Shiya icala lam, Urhoxe ngokukhawuleza, Umgwebi nje uze kuncedo lwam, ndiyakucela nceda.
Ukuthula nokuzola kuyeza, Amadoda sele eqhwabela izandla kwaye ehlonela igama lakho elingcwele, Enkosi, ndikunika uMgwebi wam Obulela, Enkosi ngonaphakade, Haleluya, Amen.
Lo mthandazo uthe ngqo ngenxa yenqanaba lobundlobongela elikhoyo kumaxesha akutshanje, kunzima kakhulu ukuhla esitratweni ngalo naluphi na usuku kwaye ungaboni imeko egcwele amandla amabi.
Kungenxa yesi sizathu le nto lo mthandazo ubaluleke kakhulu kuba sicela uMgwebi oLungileyo ukuba azise uxolo nokuzola entliziyweni yomntu ukuze ubundlobongela buyeke ngale ndlela.
Kukuphela kwentliziyo entle kaYesu Krestu enokuguqula intliziyo ukuba ibe ntle kunye neminqweno elungileyo ibe ziintsikelelo.
Nd kungcono ukuphelisa ukuxhatshazwa kunye nobundlobongela kunomthandazo ogcwele ukholo iinjongo ezintle, ngaphandle kokuzingca okwenziwe ngumphefumlo.
Thandaza nje ukugweba ukukhulula ibanjwa
Nkosi Yesu othandekayo. Wazalwa ukhululekile.
Umoya wakho onamandla onke ukhululekile, nokuba umzimba wakho awubonakali.
Yena, ongubukho bakho bobuThixo, ungaphakathi kuwe, uhlala ehamba nawe, ndibongoza ukubakho kokomoya kuwe kwaye ndimcele ukuba akukhulule, loo nkululeko eyeyabo bonke abantu abaphilayo ngelungelo lokuzalwa. ukuqonda.
Ndingumnyango ovulekileyo ekungekho mntu unokuwuvala kum kunye nocango olukhokelela eluxolweni, ekuthandeni uThixo nommelwane, ekulungeni nasekujongeni wena. lonwabo, uya kuvulelwa banzi, avuleleke kuwe, ngoku nangonaphakade.
Esi sigwebo gweba nje ngokugqibeleleyo ukukhulula ibanjwa yomelele kakhulu.
Ukuphila lo mzuzu ombi nelungu losapho okanye umhlobo ngokungathandabuzekiyo yenye yamava abuhlungu onokudlula kuwo.
Kwabo bahluthwe inkululeko yinkqubo ebuhlungu apho amaxesha amaninzi umthandazo ikukuphela kwendlela enokubonelela ngoxolo nethemba.
UMgwebi olilungisa uYesu Krestu uyacelwa ukuba izigqibo ezithathiweyo malunga nesigwebo ziphinde ziqwalaselwe, kuvulwe ukuqonda kwaye kungasebenza kwicala Ubulungisa.
Ngendlela efanayo, isicelo sinokwandiswa ukucela uxolo oluncinci kunye nomonde, ukuzama ukwenza oko kuthethwa lilizwi likaThixo, thandazela abamelwane bethu.
Umthandazo wejaji eligwebayo ngamatyala anzima
NguThixo oLungileyo kunye noMgwebi wabaphilayo nabafileyo, ilanga laphakade lobulungisa, elibekwe esiswini seNtombi Enyulu kaMariya ngempilo yomnombo woluntu.
NguJaji nje, umdali wezulu nomhlaba kwaye wafa emnqamlezweni ngenxa yothando lwam.
Wena, owawusongelwe kwisigqubuthelo kwaye ubekwe kwingcwaba owavusa kulo ngomhla wesithathu, umoyisi we ukufa nakwisihogo. Ubulungisa noMgwebi oNgcwele, yiva izibongozo zam, nimamele izicelo zam, nimamele izicelo zam, nibathumele ngokufanelekileyo.
Ilizwi lakho elingathethekiyo lazolisa uqhwithela, waphilisa abagulayo wavusa abafileyo njengoLazaro nonyana womhlolokazi kaNaim.
Ubukumkani belizwi lakho zazibaleka iidemon, zibenza bashiye imizimba yabaphethweyo, zaza zabona iimfama, zathetha nesimumu, iindlebe zabeva, baxole aboni, njengoMagdalene nomlwelwe. ukusuka echibini.
Ube ungabonakali kwiintshaba zakho, abo baye kukuvalela bawe phantsi emhlabeni kwilizwi lakho, kwaye xa uphelelwa emnqamlezweni, ngokuthetha kwakho ngamandla i-orbs yothukile. Uwavulela uPetros amabanjwa, wamkhupha ngaphandle kwabo;
Ugcinile uDimas, wamxolela lowo ukrexezayo.
Ndiyakucela, Jaji, ndikhulule ezintshabeni zam zonke, ezibonakalayo nezingabonakaliyo: i-Shroud eNgcwele owawusongelwe kuyo iyandisithelisa, isithunzi sakho esingcwele uyandifihla, isigqubuthelo esigqume amehlo akho simfamekisa abo banditshutshisayo kunye nabo bafuna mna Ububi, unamehlo kwaye awuboni ukuba iinyawo zam zingenayo kwaye azifikeleli kum, izandla zine kwaye zingandilingeli, iindlebe zinokundiva, ulwimi alunandityhola kwaye imilebe yakho iya kuthi cwaka enkantolo xa izama ukundenzakalisa.
Owu, Yesu Krestu onguMgwebi oLungileyo noNgcwele!Ndibabale kulo lonke uhlobo lwembandezelo nenkxwaleko, amava nezibophelelo, wenze iintolongo zivuleke, amakhamandela namatyathanga aqhawuke. iiqakamba nemivalo iyaqhawuka, iimela zigotywe nazo zonke izixhobo ezichasene nam ziya kuba buthuntu kwaye zibe lilize. Andifikeleli amahashe, neentlola azindikhangeli, azindifumani.
Igazi lakho liyandihlanjwa, ingubo yakho yandigubungela, isandla sakho sindisikelela, amandla akho andifihle, umnqamlezo wakho undikhusele ube sisihlangu sam ebomini nangexesha lokufa kwam.
Owu, Gweba nje, Nyana woYise ongunaPhakade, ukuba kuYe kunye noMoya Oyingcwele unguThixo omnye oyinyaniso!
Oo Lizwi liNgcwele lenziwe umntu!
Ndicela undigubungele ngengubo kaBathathu Emnye ukuze ukhululeke kuzo zonke iingozi uzukise igama lakho elingcwele.
Thandaza umthandazo kaThixo kunye nomgwebi olungele iimeko ezinzima ngokholo olukhulu!
UYesu Kristu, xa wayesemhlabeni, wayelingqina elingqalileyo loko engqondweni umntu, waziva enyameni yakhe xa wagqiba ukunikela ubomi bakhe ngenxa yokusithanda.
Kungenxa yoko le nto kungekho mntu ubhetele kunaye eziqondayo iinkqubo ezinzima, eyaziyo indlela esivakalelwa ngayo, into esiyicingayo nesikhokelayo ukuba senze okulungileyo, nokuba ayikacaci okwangoku.
Akukho sicelo sinzima esingenakusonjululwa kumthandazo onokholo oluninzi, uThixo uhlala ezigcina izithembiso zakhe.
Unokuthandaza umthandazo weJaji nangaliphi na ixesha ofuna ngalo.
Ayinaxesha, umzuzu, usuku lweveki okanye ishedyuli. Kufuneka uthandaze xa uswele, kwaye xa uthanda kunye nokholo.
Umthandazo kuSanta Martin Knight
izigaba Iidayos Ukuhamba kwetikiti